ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ၈လေးလုံးမှတ်တမ်းပုံများ
my dear frined , it is really good job this post . specially , i WANT PRO.REGIME TO SEE ABOUT THESE PICTURE.
Bro, you are right. Thanks for sharing information. Without you, I won't have chance to find interesting pic & news :)
ညီမရေ.. ဒီပုံတွေကြည့်ပြီး ပိုရင်နာမိတယ် ။ ဒါပေမယ့် အစ်မတို့တတွေ ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ကိုယ် ရုံးကန်နေကြရတာနဲ့ သူတို့အာဏာကို ပိုတည်တံ့အောင် လုပ်နေသလို ဖြစ်မလားလို့ တွေးမိတယ် ။
ဟုတ်တယ်မမ.. ညီမတို့တွေ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြိုးစားရင်း မိသားစုတာဝန်တွေကိုချည်း ထမ်းရွက်နေချိန်မှာ အာဏာရှင်တွေရဲ့ သက်ဆိုးကိုရှည်အောင် လျစ်လျူရူမိသလိုဖြစ်နေလားလုိ့ ညီမလည်း မကြာခဏတွေးမိတယ်... လွယ်လွယ်နဲ့မရတဲ့ တန်ဖိုးကြီးသော အရာတစ်ခုလို့ပဲ တွေးယူရင်း ကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်လေးက သဲတစ်ပွင့်ဆို တစ်ပွင့် ၊ မြူမှုန်တစ်ပွင့်ဆို တစ်ပွင့် လုပ်ပေးရင်း နေရောင်ခြည်လာမယ့်ရက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ့် သူရဲကောင်းတွေကို အားပေးထောက်ခံကြရအောင် ... ဒါပဲလုပ်ပေးနိုင်တော့တယ်လေ.။ ၀င်ပြောပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါပဲမမ :)
I've never seenacouple of pictures here before. Thanks!
ဒီပုံတွေမြင်ရတာ ရင်နင့်လိုက်တာ။ အဟောင်းတွေ အသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်။
တနည်းအားဖြင့် ပြောရရင်လည်း ဂျူးရဲ့ ဒီပို့စ်လေးဟာ အချိန်တွေ ကြာလာလို့ အေးခဲချင်သလို ဖြစ်သွားတဲ့ မမေတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ပူနွေးလာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးသလိုပါပဲ။
ကျေးဇူးတင်တယ် ညီမလေး ဂျူးရေ ..။ ဂျူးပြောသလို လူတိုင်းလူတိုင်း တတ်နိုင်သလောက် သဲတပွင့်စာလောက် ပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပေးကြနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်နော်။ ဗမာပြည်သူပြည်သားတွေ မနည်းဘူး မဟုတ်လား။
ညီမရေ။ အသက်ငယ်ပေမယ့်၊ ကိုယ်မမှီလိုက်တာတောင် ခုလိုကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ ပို့စ်တွေတင်ပေးတာ ကျေးဇူးလည်းတင်၊ ၀မ်းလည်းသာ၊ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်ဗျာ။